Joe Biden: ‘Ma tihid madow’ hadaad u codeyso Trump 2020 – Benaadirtv.com
Waa xaqiiq la aqbali karo in Dimuqraadiyiinta ee helaan codadka Afrikaanka Mareykanka ah inta lagu gudajiro wareegga doorashada, waxeyna Sidaas ee eheyd sannado badan. Ma hubo sababta maadaama Xisbiga Dimuqraadiga uusan si dhab ah u bixin ballanqaadyadoodii. Si kastaba ha noqotee, codeynta madowga maraykanka ayaa weli ah boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo ee taageerayaasha dimuqraadiga ah.
Isagoo la hadlaaya waraysi uu siiyay telefishanka qadiimiga ah ee ‘Breakfast Club’ oo ah barnaamij ku saleysan dadka laga tirada badan yahay, wuxuu Biden ka jawaabayaa su’aasha ah cidda u cadaadinaysa inuu u codeeyo isaga ama Madaxweyne Trump – “Hagaag, haddii aad dhibaato ku qabtid sidii loo ogaan lahaa inaad aniga ii codeysid ama Trump, ma tihid qof madow” ayuu yirey musharax Madaxweyne Joe Biden.
Maaha wax sax ah oo la sheego iyo in sidaas loo hadlo, laakiin maskaxda ku hay inuu yahay Joe biden’ka aan garaneyn sida dadka loola hadlo dabeecad xumada awgyd. Wuxuu caan ku noqday hadalada noocan ah. Ugu yaraan wuxuu ugu jawaabey qaab asiga fikirkiisa wax laga fahmi karo kumana dhex wareegin si qarsoodi ah sida uu had iyo jeer annan lagu yaqaanin.
Dabcan, jamhuuriga ayaa markiiba weerartay joe biden. Senator Republic Scott-ka Mareykanka ah oo la yiraahdo Tim Scott oo ka tirsan South Carolina, ayaa faallo ka bixiyey: “La yaab iguma ahan, laakiin waxaa nasiib darro ah inay tahay waxa ay Dimuqraadiyiintu u taagan yihiin iyo sida ay u tixgeliyaan bulshada madow. Kuma raacsani taas.”
Ogoow, Sen. Scott oo saas yirahday waa Afrikan Mareykan oo madow ah.
Haatan, Biden iyo Dimuqraadiyigu waxay kalsooni ku qabaan inay sii wadi doonaan xukunka codka bulshada madow ee Afrikan Maraykan. Sanadkii 2016 Trump wuxuu kasbaday kaliya 8% codbixiyaasha Afrikaanka Mareykanka.
Isaga oo garawsanaya inuu mar kale cagta saaray afkiisa, ayuu Joe raaligelin ka bixiyay waraysi kale oo uu siiyay Rugta Ganacsiga Madoow ee Mareykanka “Waan qaldamay inaan idhi ”madoow ma tahid hadaad u codeyso Trump. Waxay ahayd ina taxaddar muujiyo”, ayuu yidhi.
Haddii uu ka soo baxo gurigiisa isla markiiba waxaa wajihi doona isaga oo weydiinaya xubnaha golaha iyo wariyeyaasha oo doonaya in ay ogaadaan ku lug lahaanshaha wiilkiisa iyo fadeexada gaaska dabiiciga ee dalka Yukrayn (Ukraine) taas oo lacago aad u fara badan ay ku lug lahaayeen badalka baaritaanka dambiyada. ka dhanka ah Hunter, wiilka uu Joe dhalay.
Marka, in kasta oo Joe Biden uu sii wadidayo hakinta doorashadii Nofembar 2020, haddana aragtidiisa ku aadan bulshada madow waxaa laga yaabaa inuu jebiyey xeer dhaqan ah.
Ma hubo inuu ka hadli karo dariiqa looga baxo fadeexadaan, si kasta oo uu yahay qof taxaddar leh – – ama uu sameeyo in uu gabi ahaan is ilowsiiyo dambiga uu ka galay bulshada Afrikan Maraykanka.
Raage Warsame – Kansas City, Somali American Republic voter.
HOOS KA FIIRI FIIDIYOWGA
22nd Aug 2020 Editor
Previous Previous post: Breaking News: The Forum for National Parties takes an surprising position on the Dhusamareeb III agreement
Next Next post: The war of the waters: What is in it for Somalia and what role should it take?